07/10/13 ~ Myanmar Forward
ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူမှ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး လက်ကောက်အား လုယူသွားမှု ဖြစ်ပွား
Posted by drmyochit Wednesday, July 10, 2013, under မှုခင်း | No comments
၆.၇.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ၁၅၃၀ အချိန် သာကေ တမြို့ နယ်နေ မနုနုထွေး (ဘ) ဦးအုန်းလွင်သည် မိတ်ဆွေဖြစ် သူ ဦးကျော်လင်းထွေး မိသားစုနှင့် အတူ သာကေတမြို့နယ်၊ ကျောက်တိုင်မှတ်တိုင် အနီးရှိေ ရွှပုဇွ န်အအေး ဆိုင်တွင် စားသောက်ေ နစဉ် ယခင်က ခင်မင်ရင်းနှီးဖူးသူ ဦးကျော်ကျော်ထွေးနှင့် ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ သင်္ဃန်း ကျွန်းမြို့နယ်နေ အောင်နိုင်ဦးတို့ရောက်ရှိ လာပြီး အတူတူ အအေး သောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အအေးသောက်ပြီး အပြန်တွင် မနုနုထွေးသည် အောင်နိုင်ဦး၊ ဦးကျော်ကျော်ထွေးတို့နှင့် အောင်နိုင်ဦး၏ ကားဖြင့် အတူပြန်လာရာ ဦးကျော်ကျော်ထွေးအား နေအိမ်သို့ပို့ပေး ခဲ့ပြီးနောက်
အောင်နိုင်ဦးမှ စကားပြောစရာရှိ၍ လိုက်ခဲ့ရန်ခေါ်သဖြင့် ကားဖြင့် လိုက်ပါလာခဲ့ရာ ၎င်းအားလက်ထပ်ရ မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မယူလျှင်သတ်ပစ်မည်ဟု ပြောဆိုကာ သန်လျင်ဘက်သို့
မနုနုထွေးမှ နေအိမ်သို့ပြန်ပို့ပေးရန် ပြောဆိုပြီး ကားပေါ်မှ ဆင်းရန်ပြုလုပ်စဉ် အောင်နိုင်ဦးမှ ဆံပင်ဆွဲပြီးလည်ပင်းအား လက်ဖြင့်ရိုက်နှက်ခဲ့ကာ ဆက်လက် မောင်းနှင်ခဲ့ရာ အေးနန္ဒာတည်းခိုခန်း ရှေ့သို့ရောက်ရှိစဉ် ကားအားရပ်တန့်ခဲ့၍ ဆင်းပြီး ဖုန်းဖြင့် ဓါတ်ပုံရိုက်မည်ပြုစဉ် ဖုန်းအား လုယူရိုက်ခွဲခဲ့ကာ စိန်ပွင့်များပါရွှေ(၁)ကျပ်သားခန့်ရှိလက်ကောက်(၁)ကွင်း၊ တန်ဘိုးငွေကျပ် (၁၅)သိန်း အားဆွဲချွတ်လုယူကာမောင်းနှင် သွားခဲ့သဖြင့် အောင်နိုင်ဦးအား အရေးယူပေးပါရန်
၉.၇.၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင်သာကေတနယ်မြေရဲစခန်းသို့လာရောက် တိုင်ကြားခဲ့၍ (ပ)၄၆၅/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၈၂ ဖြင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း Yangon Police (facebook) အင်တာနက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါသည်။
လိမ်လည်ဆေးကုသည့် တရုတ်ဆေးခန်းများကို သတိထားရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးပြော
Posted by drmyochit Wednesday, July 10, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | 1 comment
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ တရုတ်ဆေးဆရာတွေက ကုသနေတဲ့ တရားမ၀င် ဆေးကုခန်းတွေကို ပိတ်သိမ်းဖို့ သက်ဆိုင် ရာက ညွှန်ကြားပြီးဖြစ်ပေမယ့် ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်ပြီး ဆက်ကုနေတာကြောင့် ပြည်သူတွေ သတိထား ဖို့လိုကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင်က သတိပေးပြော ဆိုပါတယ်။
ဒီနေ့ ကျင်းပတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာ မမှန်မကန် လုပ်နေတဲ့ ဆေးခန်းတွေကို ဘယ်လို အရေး ယူဆောင် ဖို့ရှိသလဲဆိုပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာ နေလင်းက မေးတာကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ခုလိုဖြေကြားခဲ့တာပါ။
၀န်ကြီးက အဲဒီ ဆေးခန်းတွေဟာ ဘယ်သူ့ဆီကမှ ကုသခွင့်လိုင်စင်မရဘဲ မမှန်မကန် လုပ်ဆောင်နေတာတွေကြောင့် ပိတ်သိမ်း အရေးယူပေးဖို့ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကို အကြောင်းကြားခဲ့ပေမယ့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှု အားနည်းတာကြောင့် ခုလို မှောင်ခို ဖွင့်လှစ်ကုသမှုတွေ ဆက်ပြီးလုပ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနောက်တိုင်းဆေးတက္ကသိုလ်တွေက ဘွဲ့ရသူလည်းမဟုတ်၊ တိုင်းရင်းဆေး ကုသခွင့် ရထားသူလည်း မဟုတ်သူတွေ အတော်များများ ၀င်ရောက်နေပြီး ဆေးကုသမှုတွေ လုပ်နေလို့ သတိထားဖို့ သင့်တယ်ဆိုပြီး ၀န်ကြီး ဒေါက်တာဖေသက်ခင်က ပြောပါတယ်။
ယဉ်ထိန်းရဲ ၈-ယောက်က ဆိုင်ကယ် မောင်းသမားအား အုပ်စုဖွဲ့ဝိုင်းဝန်း ကန်ကျောက် နှိပ်စက်ဖမ်းဆီးခြင်း
၉-၇-၂၀၁၃-ယနေ့ တွင် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ၊ တောင်ကြီးမြို့ရှိ ညဈေးတန်း ထောင့်တွင် ညနေ ၅နာရီကျော်ခန့် က ယာဉ်ထိန်းရဲ များ ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်များ စစ်ဆေးနေစဉ် ၊ ဆိုင်ကယ်သမားတစ်ဦးမှာ မူးနေပြီး ယာဉ်ထိန်းရဲအား မချေမငံပြန်ဆက်ဆံ ခဲ့ သဖြင့် ၊ ယဉ်ထိန်းရဲ ၈-ယောက်ခန့်စုဝေးရောက်ရှိလာပြီး ၊ ဆိုင်ကယ်သမားအား အုပ်စုဖွဲ့ဝိုင်းဝန်းထိုးနှက် ကန်ကျောက် သဖြင့် မေ့လဲသွားခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
အဆိုပါ မေ့လဲနေသော ဆိုင်ကယ်သမားအား ၊ ယာဉ် ထိန်းရဲများက ဒရွတ်တိုက် လမ်းမထက်ဆွဲခေါ်ပြီး ကားပေါ်တင်ပြီး ရဲစခန်းတွင်ချုပ်ထားကြောင်း မျက်မြင် သက်သေတစ်ဦး ဖြစ်သော ကိုမင်းထွေးမှ Myanmar News Now ကို ပြောပြသည်။
ရဲများအနေဖြင့် ယခုကဲ့ သို့ -အုပ်စုဖွဲ့ ရိုက်နှက်ပြီး ဖမ်းဆီးခြင်းမှာ မသင့်တော်ကြောင်းနှင့် ဥပဒေရှိလျှင် ဥပဒေအတိုင်း အရေးယူသင့်ပြီ၊ ယခုကဲ့ သို့ကိုယ်ထိလက်ရောက် မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း ကိုမင်းထွေး က ပြောပါသည်။
Posted by drmyochit Wednesday, July 10, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေ အနှစ်များတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော မန္တလေးမြို့တော် ကျုံးဘေး ပတ်ဝန်း ကျင် လမ်းမများတွင် ညအချိန် လာရောက် စုဝေးလေ့ရှိသည့် မိန်းမလျာများကို သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေ ရဲစခန်း ရဲအက်ဥပဒေအရ စတင် အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ် ဖွဲ့မှူးရုံး ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ကျုံးဘေးပတ်လည်တစ်လျှောက် တွင် မိန်မလျာများသည် အမျိုးသားများနှင့် ဖက်လှဲတကင်း ပြုလုပ်ခြင်း၊ မြှူ ဆွယ်ခြင်း၊ အများသူငါ သွားလာသည့် လမ်းပေါ်တွင် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေရန် ပြုလုပ်လျက် ရှိခြင်း တို့ကြောင့် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ ည ၉ နာရ်ီခန့်က မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး တိုင်းမှုခင်း အကူ ဌာန တာဝန် ရှိသူများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး များဖြင့် သွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ မိန်းမ လျာ ကိုးဦး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးထံမှ စုံစမ်းသိရှိ ရသည်။
ရန်ကုန်၊ သမိုင်းဘူတာရုံလမ်းတွင် အုပ်စုလိုက် အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
လူသုံးဦးက ၀ိုင်းဝန်းအဓမ္မပြုကျင့်မှုတစ်ခု သမိုင်းဘူတာရုံလမ်းရှိ တည်းခိုခန်းတစ်ခုတွင် ဇူလိုင် ၉ ရက် ည ၇ နာရီ ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့သဖြင့် ဘုရင့်နောင်ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။
ပြုကျင့်ခံရသည့်အမျိုးသမီးသည်အသက် ၃၃ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်း ရဲဌာန က အတည်ပြုထားပြီး သူမသည်အလှူတစ်ခုတွင် သွားရောက်ကူညီလုပ်ကိုင်ပြီး အပြန်လမ်းတွင် ယခုလို အဓမ္မ ကျင့်ခံရခြင်းဖြစ်သည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်သည်။
ထိုသို့ပြန်လာချိန်တွင် အတူပြန်လာသည့် အမျိုးသားကသမိုင်းဘူတာရုံလမ်း ရှိ တည်းခိုခန်းသို့ခေါ်ဆောင် ရာ သူမက လိုက် သွားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက်သူမကို ခေါ်ဆောင်လာသော အမျိုးသားကတစ်ဦးတည် အပြင်သို့ ပြန်ထွက် သွားခဲ့ ကြောင်း ကာယကံရှင်ကရဲ ကို ထွက်ဆိုထားသည်။
အဆိုပါအမျိုးသားက ပြန်လာသောအခါ အရက်များသောက်စား လာသည့်အပြင် သူနှင့်အတူ အခြား အမျိုးသားနှစ်ဦးကိုပါ ခေါ်ဆောင် လာခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးကို အဓမ္မကျင့်ခဲ့သည်ဟု ကာယကံရှင်၏ ထွက်ဆိုချက်ကို ရဲမှတ်တမ်းတွင် တွေ့ရသည်။
ယခုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အဓမ္မပြုကျင့်သူများအဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူများမှာ ကိုနေလင်းအောင်၊ ကိုကျော်နိုင် နှင့် ကိုအောင်အောင် တို့ဖြစ်ကြသည်။
ဇော်ဇော်ထွေး | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၅ နာရီ ၂၄ မိနစ်
နေရာပြောင်းပါ ၊ စာရင်းရှင်းပါ
Posted by drmyochit Wednesday, July 10, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ခေတ်မီ တိုးတက် လာတဲ့ ခေတ်ကာလနှင့် အညီ နိုင်ငံ အတွင်းမှာ အခမ်း အနားတွေ၊ နှစ်ပတ်လည် နေ့တွေ၊ အသင်း အဖွဲ့တွေ၊ တွေ့ဆုံ ပွဲတွေ အများ အပြား လုပ်လာကြ တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အတွက် အမှတ် တရ ဖြစ်စေ ရန်နှင့် အသိ အမှတ်ပြု/ ဂုဏ်ပြု ခြင်းများ အတွက် အဓိကထား ဆောင်ရွက် ကြတာကို တွေ့ရ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၈၈ မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့က ဦးစီးပြီး သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် ၈၈၈၈ အခမ်းအနား ကျင်းပရေး အတွက် စီစဉ် နေတဲ့ အစည်း အဝေးက ထွက်လာတဲ့ စကားတွေဟာ ကြားရသူ အဖို့ ရင်ထု မနာ ဖြစ်ရတယ်။ ဘာရည်ရွယ် ချက်လဲ၊ ၈၈၈၈ ရဲ့ ကောင်းကွက်ကို ပြောပြပါဦး။ နောက်ပြီး အခု ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့မှာ ခေါင်းဆောင် နေတဲ့ ကောင်တွေ မင်းတို့က ဘာတွေ မို့လို့လဲ၊ နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူ့ အကျိုး မပြောနဲ့ ကိုယ့်ရပ်ကွက် အတွက် ဘယ်လောက် လုပ်ပြီးပြီလဲ။ ကုန်ကုန်ပြောမယ် မင်းတို့ မိန်းမတွေ အတွက်ကော ခင်ပွန်း တာဝန် ကျေခဲ့ ရဲ့လား။ နိုင်ငံ့ အခြေ အနေ မပြောနဲ့ မင်းတို့ ထောင်ထဲမှာ ရောက်နေတဲ့ အချိန် မင်းတို့ မိန်းမ တွေရဲ့ အခြေ အနေ မှန်ကော သိရဲ့လား။ ငါးပွက်ရာ ငါးစာ ချလိုတဲ့ မင်းတို့လို ဂဏန်းသွားသွားတဲ့ ကောင်တွေ အတွက် ဆုံဆည်းရာ နှစ်ပတ်လည် လုပ်ချင် တာလား။
ပိုဆိုး တာက ၈၈၈၈ နှစ်ပတ်လည် နေ့မှာ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ တက်ရောက် သူများ တည်းခိုရန် ဆိုပြီး မင်းတို့ အစည်း အဝေးက ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ချက် ချထားတာ ပြန်စိစစ်ပါ။ မင်းတို့ အခမ်း အနားကို တက်မဲ့ အလုပ်မရှိ၊ အကိုင်မရှိ ပြည်တွင်း ပြည်ပက သူတွေ တည်းခိုဖို့၊ စားဖို့၊ သောက်ဖို့၊ မဟုတ်တဲ့ နေရာ ပေါင်းစုံ သွားဖို့ လူစု တည်းခိုမည့် နေရာတွေက သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ မဂ္ဂင်ကျောင်း၊ ဓမ္မပီရကျောင်း၊ ရွှေသိမ်ဓမ္မ သိဂ င်္ီင်္ီင်္ီင်္ီင်္ီကျောင်း၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် မှာ ရှိတဲ့ ပေါက်စေတီကျောင်း၊ သမိုင်းမြို့မ ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ သာသနာ့ သိပ္ပံကျောင်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ အင်းစိန် မြို့ဦးကျောင်း၊ တောင် ဥက္ကလာပ မြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ မင်္ဂလာ ရာမ ကျောင်းတွေတဲ့...ကဲကောင်းကြရောပေါ့။
ဘုန်းကြီး ကျောင်းဆိုတာ လူတိုင်း အထွဋ် အမြတ် ထားတဲ့ နေရာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ မင်းတို့လို ပုစွန် ဦးနှောက်နဲ့ကောင်တွေ မသိကြ ဘူးလား။ မင်းတို့လို ကောင်တွေကြောင့် နိုင်ငံ အတွင်းမှာ ဘာသာ ရေးကို နိုင်ငံရေး ခုတုံး အဖြစ် အသုံးချတာ ခံနေ ရတာ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဆိုတာ ပရိယတ္တိ၊ ပရိပတ္တိ သာသနာ များကို ပြန့်ပွား ထွန်းကားအောင် ဆောင်ရွက်တဲ့ နေရာတွေပါ... ဟ ... ငနွား တွေရ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ မင်္ဂလာဆောင် ကျင်းပတာ ရှိသလား (ဆွမ်းကျွေးမပါ)။ သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ် တွေကို မင်းတို့ ခုတုံး လုပ်ပြီး အသုံးချတယ်၊ စည်းရုံးပြီး နိုင်ငံရေးထဲ ထည့်သွင်းတယ်၊ လူမှုရေးထဲ ရောယှက် စေတယ်၊ ငါတို့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို အရောင် ဆိုးနေတာ မင်းတို့လို ကောင်မျိုးတွေ ရှိနေ လို့ပဲ။
မင်းတို့ ဘာသာ မင်းတို့ ဧည့်သည်တွေကို အခြား နေရာမှာ ထားပါလား။ မင်းတို့ပိုက်ဆံတွေ ဘယ်ရောက် ကုန်ပြီလဲ။ တစ်လောက ကုလား ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေဆီက ရထားတဲ့ ငွေတွေ ဘယ်မှာလဲ။ ရခိုင် အရေး၊ ကချင် အရေးကို ဗန်းပြပြီး တောင်းထားတဲ့ ငွေတွေ ဘယ်ရောက် ကုန်ပြီလဲ။ ရခိုင် အရေး၊ ကချင် အရေးမှာလဲ မင်းတို့တွေ သွားလှူတာ မင်းတို့ ရထား တာရဲ့ အပုံ ၂၀ ပုံ တစ်ပုံမရှိ ပါဘူး။ အဲဒီ ကျန်တဲ့ ငွေတွေ ဘယ်ရောက် သွားပြီလဲ။ မင်းတို့ နိုင်ငံခြား သွားတဲ့ အချိန် ဇိမ်ခန်း တွေမှာ ဖြုန်းပစ် လိုက်ပြီလား။ ဒါမှမဟုတ် မင်းတို့ မိသားစု စားဝတ် နေရေး အတွက် ဖြေရှင်း လိုက်ပြီလား။ မင်းတို့ကော မယ်မယ် ရရ အလုပ် အကိုင် မရှိပဲ ဘယ်လို ရပ်တည် စားသောက် နေတယ် ဆိုတာ မင်းတို့ ပြော ရဲလား။
ဘာပဲပြောပြော (၁) မင်းတို့ ရထားတဲ့ ငွေတွေ အတွက် လှူထားတဲ့ လူတွေ အမြင် ရှင်းအောင် ရှင်းတမ်း ထုတ်ပါ။ (၂) မင်းတို့ ၈၈၈၈ နှစ်ပတ်လည် နေ့အတွက် တည်းခိုမည့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ဧည့်သည်တွေကို ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ တည်းခို စေခြင်း လုံးဝ လက်မခံပါ။
ပြည်သူ တစ်ယောက် အဖြစ် မြင်တာကို ပြောနေခြင်း ဖြစ်တယ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး မုန်းတီးမှု မရှိပါ၊ နားလည် ပေးစေ လိုပါတယ်။ သူများတွေလို ရင်ထဲမှာ သည်းခံ အောင့်အီး မနေ တတ်ပဲ ရင်ဖွင့်ချရ ပေမဲ့ ငါ့ရဲ့ စကားလုံး တွေဟာ ပါးပါး လေးပဲ ရှိသေးတယ်ဆိုတာ မင်းတို့ အသိဆုံးပါ သူငယ်ချင်းတို့။
Photo From : Internet
Posted by drmyochit Wednesday, July 10, 2013, under သတင်းများ | No comments
၁၉၈၁ခုနှစ်က ဂျပန်နိုင်ငံအလှူငွေနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဥာဏ်တော်ပေ (၈၀) အမြင့်ရှိတဲ့ ရုပ်ပွားတော်ကြီး ရဲ့ အလယ်ပိုင်းလောက်မှာဗုံးကို တပ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီဗုံးဟာ မပေါက်ကွဲခဲ့ပါဘူး။ကျွမ်းကျင် သူတွေက အဲဒီ ဗုံးကို ဖြုတ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ရဲကပြောပါတယ်။ ဗုဒ္ဒဂါယာ အကြမ်းဖက် ဗုံးခွဲခဲ့ တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာတဲ့ အဖွဲ့အစည်း မရှိသေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ မြန်မာပြည်က ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေကိုအကြောင်းပြုပြီး ၊အစ္စလာမ် အစွန်းရောက် စစ်သွေးကြွတွေက ဗုဒ္ဓဂယာကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစည်နေတယ်ဆိုတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးသတင်းတွေရရှိခဲ့ကြောင်း ပြောပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်းက နယူးဒေလီရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယမူဂျာဟစ်ဒင် အဖွဲ့ဝင် လေးဦး ကို စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ရာမှာ အန်ဒရာပရာဒေ့ရ်ှပြည်နယ်၊ ဟိုက်ဒရာဘတ်မြိ့၊ ဒါစုခန်ဂါ အရပ် နဲ့ ဗုဒ္ဓဂါယာက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုရားစေတီတွေ၊ ကျောင်းတွေကို တိုက်ခိုက်ရေးအတွက် အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းဖို့ ပါကစ္စတန်အခြေစိုက်၊ အိန္ဒိယ မူဂျာဟစ်ဒင် အဖွဲ့ကို တည်ထောင်သူ ရီယက်ဘတ်တယ်က ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့ပြင် အမေရိကန်-ပါကစ္စတန် အကြမ်းဖက်သမား ဒေးဗစ် ကိုးလ်မန်း ကို FBI နဲ့NIA တို့က စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ ဗုဒ္ဓဂယာကို အကြမ်းဖက်ပစ်မှတ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် ဟိုက်ဒရာဘတ်မြိ့၊ ဒါစုခန်ဂါ မှာ ပထမအကြိမ် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ ပြီးခဲ့တဲ့ တန င်္ဂနွေနေ့ က ဗုဒ္ဒဂါယာ မှာ ဒုတိယအကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မတ်လ က အာဖဂန်နစ္စတန် နိုင်ငံ ဘာမီယန်ပြည်နယ်ကဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတွေကို နိုင်ငံတကာကတောင်းပန်နေတဲ့ကြားက တာလီဘန် တွေက ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်။
“VITA သစ်သီးစုံ အစားအစာအလုပ်ရုံမှ လူကုန်ကူးခံရသူ ၉ဦးအား ဒုတိယအကြိမ် ကယ်တင်” (ကိုတီး)
ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့အနောက် မြောက်ပိုင်း ကီလိုမီတာ ၁၀၀ခန့်တွင် ရှိသော ကန်ချနဘူရီခရိုင် ထာမ ကန်မြို့နယ်၊ ဆင်တော်ရပ်ကွက် တွင်ရှိသော V&K PINE APPLE CANNING Co,Ltd တွင် လူကုန်ကူး ခံနေရ သည့် အလုပ်သမား ၉ဦးအား ပူးပေါင်းအဖွဲ့များက ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးပွဲစား၂ဦးကို လက်ရ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ သည်။
ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၃၀ ရက်နေ့က ထိုင်းအစိုးရ လူကုန်ကူးမှုအဖွဲ့DSI,မြန်မာအလုပ်သမားကူညီစောင့် ရှောက်ရေးကော် မတီ ညွန်ကြားရေးမှူး၊ ထိုင်းတောင် ပိုင်းအခြေစိုက်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးဖေါင်ဒေးရှင်းFED နှင့် ဘန်ကောက် အခြေစိုက်ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံ သားများအဖွဲ့ MATတို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ မြောက်ဥက္ကလာပ မှ ပွဲစား ဒေါ်သက်သက်ဝင်း နှင့် မစုမာ တို့ ၂ဦးတို့ထွက်ပြေးသဖြင့် လိုက်လံ ဖမ်းဆီးခဲ့ကြရသည်။
၎င်းတို့ရောင်းစားထားသည့်ကိုမင်းဇေါ်၊ မော်ဇေါ်ဦး၊ မောင်နိုင်ဘို၊ မောင်သက်အောင်၊၊မောင်ဇင်မျိုးနိုင်၊ ကိုသက်နိုင်၊ မောင်ဝင်းနိုင်ထွန်း၊ မောင်ကျော်ဆွေ နှင့် မောင်စံလင်း တို့၉ဦး တို့ကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ သည်။
ထိုသူတို့ရောင်းစားခံနေရကြောင်း မြန်မာအစိုးရလူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့MAU မှ ထိုင်း အစိုးရလူကုန်ကူးမှုအထူးထောက်လှမ်းရေး DSIနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ MAT အဖွဲ့ တို့ထံသို့ ပူးပေါင်း အကူညီတောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မေလ ၁၇ ရက်နေ့ကလည်း အဆိုပါ နာနတ် သီးစက်ရုံမှ အဆိုပါ ပွဲစားများ ရောင်းစားထားသူများဖြစ်ကြသော တောသား အသက် ၂၀နှစ်၊ ဇေါ်ဦးမောင် ၂၄နှစ်၊ ဘိုလိုလတ် အသက် ၂၄ နှစ်၊ မောင်သက်အောင် ၂၅ နှစ်၊ ကျော်ရွှေ ၂၇ နှစ်၊ သက်နိုင် ၃၆ နှစ်နှင့် မင်းဇေါ် ၃၆ နှစ်တို့ကို ပထမ တစ်ကြိမ် ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ ကယ်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။
၎င်းတို့အားလုံး ရန်ကုန်မြို့ မြောက်ဥက္ကလာပရပ်ကွက်မှ ဖြစ်ကြပြီး တရပ်ကွက်တည်းနေ မ၀င်းသန္တာအောင်မှ မြ၀တီတွင်ကြိုက်သည့်အလုပ်လုပ်တစ်လကိုကျပ်ငွေသုံးသိန်းရသည်ဟု ပြောဆိုစည်းရုံး သဖြင့် မိမိတို့စရိတ်ဖြင့် လာခဲ့ကြကြောင်း ကိုမင်းဇေါ်ကပြောသည်။
“ ပုလိပ်တွေလာမယ်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ဆီမှာသတင်းေ ပါက်နေ တယ်၊ ဒါကြောင့် ကျနော် တို့ဆီက လက်ကိုင် ဖုန်းကိုပွဲစား ဒေါ်သက်သက်ဝင်းကအကုန်သိမ်းထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို ထပ်ခိုးပေါ်မှာဝှက်ထားပါတယ်။
ညနေလစ်တာနဲ့ ကျနော်တို့ ထွက်ပြေးကြတာပါ။ ကျနော်တို့ကို တိရိစ္ဆာန် တစ်ကောင်လိုခိုင်း
ပါတယ်။ ထမင်းဟင်း မကောင်းဘူးလို့ပြောတော့ ပွဲစား ဒေါ်စုမာကအပျော်ထမင်းချက်စား ထွက်တာ မဟုတ်ဘူး၊ စီးပွားလာရှာတာတဲ့။ ကျွေးသလိုစားတဲ့၊ ကျနော်တို့ ၀က်စာလိုထမင်းကို စားရပါတယ်။ ဘယ်မှ မသွားရပဲ အခန်းထဲမှာ အစောင့်နဲ့ ထားပါတယ်” ဟုပြောသည်။
ဗုဒ္ဓဂယာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်များ မြန်မာအစိုးရထံ ပေးပို့မည်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘီဟာပြည်နယ်ရှိ မြတ်စွာဘုရား ပွင့်တော်မူရာ ဗုဒ္ဓဂယာရှိ မဟာဗောဓိ စေတီတော်တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများမှ ရရှိသော အချက်အလက်များကို မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရထံ ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံရုံးမှ ဒုတိယ သံအမတ်ကြီး Mr. Sailas Thangal က The Voice သို့ ပြောကြား သည်။
အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အတွင်းဝန် Mr.Ranjan Mathai က မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်နှင့် လာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးစဉ် ယင်းသို့ ပြောကြား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယ သံရုံးမှ ဒုတိယ သံအမတ်ကြီးက ရှင်းပြသည်။
Mr.Ranjan Mathai က ဗုဒ္ဓဂယာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုများမှ ရရှိသော အချက်အလက်များကို မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရထံ တင်ပြပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လိုအပ်ပါက လုံခြုံရေး လုပ်ငန်းများတွင် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဟု မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
“ဗုဒ္ဓဂယာကို ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ဘုရားဖူး နယ်မြေအဖြစ် ပြန်လည် ဖန်တီးပေးနိုင် လိမ့်မယ်လို့ အိန္ဒိယ အစိုးရ ကိုယ်စား အာမခံချက် ပေးပါတယ်” ဟု Mr. RanJan Mathai က ပြောကြားခဲ့သည်။
မဟာဗောဓိ ညောင်ပင် ခြေရင်းတွင် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့ အိန္ဒိယ စံတော်ချိန် နံနက် ၅ နာရီမိနစ် ၃၀ ခန့်က စတင် ပေါက်ကွဲခဲ့သည့် အဆိုပါ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဘုရားဝတ်ပြုနေစဉ် ဒဏ်ရာ ရရှိသွားသော မြန်မာ သံဃာတော် ဦးဝိလာသဂ္ဂ၏ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးထံ တင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အပြင် ယင်းသံဃာကို အိန္ဒိယ အစိုးရက တာဝန်ယူ စောင့်ရှောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သေးသည်။
ထို့အပြင် ၎င်း၏ ခရီးစဉ်အတွင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ဒုတိယ သံအမတ်ကြီးက အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
ယင်းသို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ အမွေအနှစ် တစ်ခုဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဂယာတွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းသည် အလွန် ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က Mr. RanJan Mathai နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ဗုဒ္ဓ အမွေအနှစ် များစွာ တည်ရှိနေသည့်အတွက် ယင်း အမွေအနှစ်များကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အားလုံး၏ ကိုယ်စား ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံများနှင့် သံခင်းတမန်ခင်းအရ အရှက်ရစေမည့် ကိစ္စ ဖြစ်သောကြောင့် တရားခံကို အမြန်ဆုံး ဖော်ထုတ်ပေးရန်နှင့် လုံခြုံရေး ကိစ္စရပ်များ အရှိန်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ် ကြောင်း ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ဘူတန်၊ ထိုင်းနှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့က အသီးသီး ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း India TV သတင်း စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၁၉၄၉ခုနှစ်ပြည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေးအက်ဥပဒေပြန် လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ နှင့်စပ်လျဉ်း သည့်မေးခွန်း
Posted by drmyochit Wednesday, July 10, 2013, under ပြည်သူ့လွှတ်တော် | 1 comment
၁၉၄၉ ခုနှစ် ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေးအက်ဥပဒေ အရ တစ်နှစ်လျှင် အရေးယူခဲ့သည့် မှုခင်း အရေအတွက်၊ အရေးယူခံရသည့် အမျိုးသမီးငယ်များအား ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးရှုထောင့်မှ ကူညီထားခြင်းနှင့်၁၉၄၉ခုနှစ် ပြည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေး အက်ဥပဒေ ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရေးဆွဲရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိတို့ နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ပြည့်တန်ဆာဆိုသည်မှ ဗုဒ္ဓခေတ်ကတည်းကရှိခဲ့ပြီး၊ ဒီနေ့ခေတ်မှာလည်း ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးတွင် ပြည့် တန် ဆာ များ ရှိနေပါကြောင်း၊ ဘာသာရေး အထိန်းအကွပ်ကြောင့် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံနှင့် မဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံ သာလျှင် ကွာခြားလျှက် ရှိရာ ပြည့်တန်ဆာများနှင့် ပတ်သက်သော ဥပဒေတွေများကိုလည်း ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားကြပါကြောင်း၊ အာရှဒေသတွင် ဂျပန်၊ တရုတ်၊ ထိုင်း၊ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ယင်းလုပ်ငန်းများကို တရားဝင်ဈေးကွက် အဖြစ်ကို သတ်မှတ်ပေးထားပါကြောင်း၊ ဤ ကိစ္စ ရပ်များမှာ မလွန်ဆန်နိုင်သော လူတန်းစားများအတွက် သီးခြား သတ်မှတ်ပေး ထားခြင်း လည်းဖြစ် ပါကြောင်း၊ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မဆို ပြည့်တန်ဆာမှာ အနည်းနှင့် အများရှိနေကြပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ပြည့်တန် ဆာ ဆိုသည်မှာ ခေတ်အဆက်ဆက်က ရှိခဲ့ပြီး ယခုအချိန်ထိ လျော့နည်းပပျောက်သွားခြင်း မရှိသေး ပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲမွဲတေမှုပြဿနာနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါး မှုကြောင့် လည်းကောင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေရရှိသော်လည်း လုံလောက်မှု မရှိသည့် အမျိုး သမီး များ ရရှိသော လုပ်အားခများကြောင့် လည်းကောင်း တချို့သော အမျိုးသမီးများမှာ ဤဘဝကို ရောက်ရှိသွား ခဲ့ရပါကြောင်း၊ ငွေကိုလွယ်လွယ်ရလိုမှု အလုပ်အကိုင်မရှိလို့ လုပ်ရာကနေ နစ်မွန်းသွားပြီး မထူး ဇာတ် ခင်းကြသော သူများလည်း အများကြီးရှိသလို၊ ကောင်းရာ ကောင်းကြောင်းလုပ်ကိုင်ပြီး ဒီဘဝက ရုန်းထွက် ချင်သူများလည်း အများကြီးရှိပါကြောင်း။
၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့သော ပြည့်တန်ဆာ ပပျောက်ရေး ဥပဒေသည် တချို့နေ ရာ များတွင် ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးခြား ကျင့်သုံးနေသော တာဝန်ရှိသူ တချို့ကြောင့် ပြည့်တန်ဆာများ အနေဖြင့် လည်း ပိုမိုနစ်နာခဲ့ရပါကြောင်း၊ ဒီပြည့်တန်ဆာပပျောက်ရေးဥပဒေကို အလွဲသုံးသူတချို့ကိုလည်း ပြည့်တန် ဆာများအနေဖြင့် ရင်ဆိုင်နေကြပါကြောင်း၊ “စီမံချက်ရှိလို့ မကျေနပ်ရင် ကွန်ဒုံးဆောင် ထားလို့ဖမ်း၊ အဖမ်းခံ ရမှာစိုးလို့ ကွန်ဒုံးမဆောင် ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ရောဂါသည်တွေ များပြား လာခဲ့ရပါတယ်။” အင်းစိန်ထောင်တွင် HIV ရောဂါသည်များမှာ ၂ ရက်ကို ၁ ယောက်နှုန်းဖြင့် သေ ဆုံးနေကြ ရသည်ကို မိမိ အနေဖြင့် သိမြင်ခဲ့ရပါကြောင်း၊ အခြေအနေဆိုးလို့ သေဆုံးခါနီးကျမှ ထောင် ကနေ တစ် ဆင့် ဆေးရုံကို တင်ကြရရာ ဆေးရုံရောက်မှ သေဆုံးသွားရသည့် သူများလည်းရှိပါကြောင်း၊ တချို့ထောင် ကိုရောက် လာပြီးမှ စစ်ဆေးလို့ HIV ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိရသော လူများကို တွံတေးရှိ အမျိုး သမီး စောင့်‌ရှောက်ရေးစခန်းသို့ ပို့ထားသော်လည်း ရောဂါသည် အားလုံးမှာလည်း ဤနေရာသို့ မရောက် ရှိ နိုင်ပါကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် ပြည့်တန်ဆာဥပဒေတွင် ကျူးလွန်တာချင်းအတူတူ အမျိုးသားများမှာ ၎င်းပြစ်မှု တွင် ဖက်စပ်ပါဝင်သည်လည်းဖြစ်ပြီး ပုဒ်မ ၁၄ အရ တရားသူကြီးရှေ့တွင် စုံလင်စွာ ဖော်ပြနိုင်ရင် ဤဥပဒေ အရ ပြစ်ဒဏ်မှ ကင်းလွတ်စေရမည်ဟု ဖော်ပြထားချက်အရ လိင်အရောင်းအဝယ် လုပ်သူချင်း အတူ တူ လိင်ကိုရောင်းစားသူ အမျိုးသမီးကတော့ ပြစ်မှုမြောက်ပြီး လိင်ကို ဝယ်ယူသူ အမျိုးသားမှာတော့ ပြစ်မှု မမြောက်ခြင်း ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည့်အတွက် ဤအချက်မှာ ပြန်လည်ပြုပြင်သင့်သော အချက် အဖြစ် ထင်မြင် မိပါကြောင်း၊ ထို့အတွက်ကြောင့် မိမိတို့အနေဖြင့် ပြည့်တန်ဆာများကို ထိန်းသိမ်းရန် စဉ်းစား ရ မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယင်းအလုပ်လုပ်သူများကို ကျန်းမာရေးအရ စစ်ဆေးပြီး လိင်နဲ့ ပတ် သက်သော ရောဂါများ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှု မရှိအောင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု များကို တရားဝင် ခွင်ပြုပေး မည်လား၊ သို့မဟုတ် ပြည့်တန်ဆာ ဆိုသော်လည်း နိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံသား တစ်ဦး ရပိုင်ခွင့်‌ရှိသော တရား ဥပဒေနှင့် အခွင့်အရေးများကို ရနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်လား၊ ထို့ပြင် ကလေး သူငယ် အရွယ်များ မုဒိမ်းကျင့်ခံရတာတွေ၊ မိကောင်းဖခင် အမျိုးသမီးလေးများအပေါ်တွင် ပစ်မှတ် ထားနိုင်သော အမျိုးသားများ၏ အန္တရာယ်မှ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လျော့ပါးသွားပြီး မုဒိမ်းမှု အန္တရာယ် ကိုလည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ လျော့နိုင်မည်ဟု မိမိအနေဖြင့် ထင်မြင်ယူဆမိပါကြောင်း၊ ထို့အ တွက်ကြောင့် အောက် ပါမေးခွန်း များကို မေးမြန်းလိုပါကြောင်း-
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော် အစိုးရလက်ထက်တွင် ၁၉၄၉ ခုနှစ် ပြည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေး ဥပဒေအရ တစ်နှစ်လျှင် အရေးယူခဲ့သော မူခင်းအရေအတွက် မည်မျှရှိပါသနည်း။
အဆိုပါ မူခင်းများဖြစ်ပွားရခြင်းမှာ နိုင်ငံတော်၏ ဆင်းရဲမွဲတေမှုပြဿနာနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှု ပြဿနာ တို့ကြောင့် ပြည့် တန်ဆာ မူခင်းအများစု ဖြစ်လာပြီး ဖမ်းဆီးပြစ်ဒဏ်ပေးရုံဖြင့် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်း၊ ပြည့်တန် ဆာအရေအတွက်တွေ များပြားလာ ခြင်းကို ဟန့်တားနိုင်မည်လား။
၁၉၄၉ ခုနှစ် ပြည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေးဥပဒေအရ အရေးယူခံရသော အမျိုး သမီးများမှာ အကျဉ်းထောင် အတွင်းမှာ HIV,AIDS ရောဂါ ပပျောက်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ဘဝသစ်ပြန်လည် ထူထောင်ရေး အတွက် လည်းကောင်း ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးရှု ထောင့်မှရှုမြင်ပြီး ထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာသည့် အခါ မည်ကဲ့သို့ ကူညီထားပါသနည်း။
အကျဉ်းထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်သောအခါ မူလပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို ပြန်လည်မရောက် ရှိနိုင်ရေး အတွက် နိုင်ငံတော်မှ မည်ကဲ့သို့ စီမံထားရှိပါသနည်း။
၁၉၄၉ ခုနှစ် ပြည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေး အက်ဥပဒေအရ ယနေ့ခေတ် ကာလနှင့် လိုက်လျော်ညီထွေမှု မရှိသည့် အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိ သိရှိလိုပါကြောင်း မေးမြန်းပါသည်။
၁၉၄၉ ခုနှစ် ပြည့်တန် ဆာနှိပ်ကွပ်ရေး အက်ဥပဒေသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် အာဏာ သက်ရောက်ပြီး ယနေ့အထိ ကျင့်သုံးနေသော ဥပဒေဖြစ်ပါသည်။ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းခြင်း ကို မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှုအရ လူမှုရေး နယ်ပယ်တွင်လက်မခံသည့်အတွက် ထိရောက်စွာ အရေး ယူနိုင် ရန် ၁၉၄၉ ခုနှစ် ပြည့်တန်ဆာ ပပျောက်ရေး အက်ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်း ခဲ့ရာ ပြည့်တန်ဆာ အဖြစ် အသက်မွေးခြင်းမှာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအကြောင်းတရားများနှင့် ဆက်စပ်ပေါ်ပေါက် ရခြင်းဖြစ် သည့် အတွက် ၁၉၅၆ ခုနှစ် ပြည့်တန်ဆာ ပပျောက်ရေး ပြင်ဆင်ချက် အက်ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ဥပဒေ၏ အမည်ကို ၁၉၄၉ ခုနှစ် ပြည့်တန်ဆာ နှိပ်ကွပ်ရေး အက်ဥပဒေအဖြစ် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် ရာဇဝတ်ပြစ်မှုများ မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်သည့် အနေဖြင့် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်း များကို ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ရာ ပြည့်တန်ဆာဖမ်းဆီးမှု၊ အရေးယူမှု အရေအတွက်မှာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ၁၉၅၆ မှု၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ၃၂၂၆ မှုနဲ့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ မေလအထိ ၆၄၀ မှုကို အရေး ယူခဲ့ ပါကြောင်း၊ ပြည့်တန်ဆာအမှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်ကျခံရသူများမှာ အကျဉ်းထောင်မှာဖြစ်စေ၊ အမျိုး သမီးပြုပြင် ထိန်းသိမ်း သင်တန်းကျောင်းမှာဖြစ်စေ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စခန်းများမှဖြစ်စေ ကျခံရသော ပြစ်ဒဏ် ကာလအတွင်းမှာ စည်းကမ်းတကျဖြင့် နေထိုင်ကြရပါကြောင်း၊ လူ့သဘာဝအရ လွတ်လပ်စွာနေ ထိုင်လို သည့်ဆန္ဒကို မခံစားရသည့် အတွက် နောင်ထပ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ရန် မသင့်ကြောင်း အသိပညာ ရစေဖို့ ဖမ်းဆီးပြစ် ဒဏ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို ထိုက်သင့်သော ပမာဏတစ်ခုအထိ ဟန့်တားနိုင် မှာဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုပြဿနာ တမှာ ပြည့်တန်ဆာ တိုး ပွားစေသော အကြောင်းများဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ကိုယ်ကျင့်တရားပေါ် မှာတန်ဖိုးထားမှု စံနှုန်းလျော့ ပါးခြင်း ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်အရ လူမှုဆက်ဆံရေးခြေအနေ လွတ်လပ် ကျယ်ပြန့်လာခြင်း စသည့် အခြား အကြောင်း တရားများလည်း ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ရွေးချယ်နိုင်သော အခြေအနေများတွင် ရိုးသားကြိုးစားစွာ လုပ်ကိုင် စားသောက် လိုစိတ် မရှိဘဲ လွယ်လွယ်နှင့်ငွေရသော ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းကိုသာ ရွေးချယ်ကြ သူများလည်း ရှိကြောင်းကို လေ့ လာတွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းနှင့် ပြည့်တန်ဆာတို့ကို ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းပြီး အရေးယူ အပြစ်ပေးခြင်းနှင့် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း ပပျောက်သွားမည်ဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း အတိုင်း အတာ တစ်ရပ်အထိ ဟန့်တားမှုဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ပြည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေး အက် ဥပဒေ အရ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရသော အမျိုးသမီးများကို အကျဉ်းထောင်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် အချိန် မှစပြီး အကျဉ်းထောင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ မှတ်တမ်းတင် ဆောင် ရွက်ပြီး အကျဉ်းထောင် ဆရာဝန်နှင့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ခုခံကျကာလသား ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့မှ ပြည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေးဥပဒေအရ အရေးယူခံရတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်များကို HIV, AIDS ရောဂါ ပပျောက်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေး ပညာပေးခြင်းနှင့် လက်ကမ်းစာစောင် များဖြန့်ဝေခြင်း၊ နှစ်သိမ့် ဆွေးနွေးပညာပေးခြင်းနှင့် သွေး စစ်ဆေးခြင်း ကာလ သားရောဂါနှင့် HIV, AIDS ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ များကိုဆေးကုသပေးခြင်း၊ ပြုစုစောင့် ရှောက်ခြင်း စသော လုပ်ငန်းတွေကို ပုံမှန်ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါကြောင်း၊ အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက် ပြီး ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း ပြန်လည်မလုပ်ကိုင်နိုင်စေရေး အတွက် ပြစ်ဒဏ်ကာလအတွင်း စာကြည့် တိုက်မှာရှိ စာအုပ်များ ဖတ်စေခြင်း၊ အသိပညာပေးခြင်းနှင့် ဇာထိုး၊ ပန်းထိုးလုပ်ငန်းများ၊ စက်ချုပ် လုပ်ငန်းများ၊ မျက်တောင့်တုလုပ်ငန်းများ၊ ဆံကေသာအလှပြင် သင်တန်း၊ မျက်နှာအလှပြင်သင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာ သင်တန်း၊ အကသင်တန်း၊ ဒီဇိုင်းနာသင်တန်း၊ ‘အ’ သုံးလုံးသင်တန်းပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေး လျက် ရှိပါကြောင်း၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ ရောက်ရှိလာသော ပြည့်တန်ဆာနှိပ် ကွပ်ရေး အက်ဥပဒေအရ အရေးယူခံထားရတဲ့ အသက် ၁၈ နှစ် အောက် အမျိုးသမီးများကို အသက်မွေး ဝမ်း‌ကျောင်း ပညာများ သင်ကြားပေးပြီး လူမှုအသိုင်းအဝန်း အတွင်း ပြန်လည်ဝင်ဆံ့နိုင်ရန် မိမိဘဝရပ် တည်နေ ထိုင်ရေး လေ့ကျင့်ပေးရန် ဆေးဝါး ကုသမှု ခံယူရန် စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှု ရှိစေရန်နှင့် သင်တန်း ကာလ အတွင်း ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်နိုင်ရန် အမျိုးသမီးများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဌာန တွံ့တေးကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ အော က်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာလည်းကောင်း၊အမျိုးသမီးများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဌာန မန္တလေးကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့မှာ လည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အမျိုးသမီး များပြုစု စောင့်ရှောက်ရေး ဌာနများတွင် လူမှုရေးနှစ်သိမ့် ဆွေးနွေးပညာပေးခြင်းများကို သင်တန်း သူများအား တစ်ဦး ချင်း အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးပညာပေးခြင်း၊ လူမှု အသိုက်အဝန်းသို့ ပြန်လည် ဝင်ဆံ့နိုင်ရေး အတွက် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ တရားထိုင်၊ တရား နာစေခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ပညာရေး အနေဖြင့် စာမတတ်သူများကို အခြေခံ ‘အ’ သုံးလုံး သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် ပြင်ပမှ ဘဝရပ် တည်နိုင်ရန် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်များအဖြစ် စိုက်ပျိုးရေး၊ စက်ချုပ်၊ ဇာထိုးပန်းထိုး၊ ကြိုး ကျစ်နှင့်‌ တက်တင်း ပညာရပ်တွေကို အသက် မွေးဝမ်းပြုနိုင်သည်အထိ သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါကြောင်း။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ လေ့လာသုတေသနပြုချက်များအရ ပြည့်တန်ဆာများ မှာ HIV, AIDS ရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းက ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ ၃၈ ရာခိုင်နှုန်းရှိရာမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၇.၁ ရာခိုင် နှုန်းအထိ ကျဆင်း လာသည်ကို တွေ့ရှိရ ပါကြောင်း၊ ရောဂါ ပိုးကူးစက်မှုမရှိစေရန် ကာကွယ်ရေးအတွက် ဦးတည် အုပ်စုများ မှာ ရာနှုန်းပြည့် ကွန်ဒုံးအသုံးပြုရေး စီမံချက် လုပ်ငန်းများကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ စတင် ဆောင်ရွက် ခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ မြို့နယ်ပေါင်း ၈၆ မြို့နယ်မှာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ပြည့်တန် ဆာနှိပ်ကွပ်ရေး အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ မှာ မည်သူမဆို မိန်းမတစ်ဦး တစ်ယောက်ကို ပြည့်တန် ဆာဖြစ်စေ ရန် သော်လည်းကောင်း၊ ပြည့်တန်ဆာ ကိစ္စအလို့ငှာ ပြည့်တန်ဆာအိမ်တွင် သွားရောက်နေ ထိုင်စေရန် သော် လည်းကောင်း၊ သွေးဆောင်ခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုခြင်း ခံရဖွယ်ရှိသည်ကို သိလျက် နဲ့ဖြစ်စေ ထိုမိန်း မကို ပြည့်တန်ဆာမဟုတ်သော လက်ရှိအိမ်တစ်ခုမှ ထွက်ခွာသွားရန်သွေးဆောင်လျှင် ၁ နှစ်အောက် မနည်း ၃ နှစ်ထက်အပိုသည့် ထောင်ဒဏ်စီရင်နိုင်စေ ရမည်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ ၆ မှာ ကာလသားရောဂါ စွဲကပ်လျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရ သောမိန်းမကို ခရိုင် ရာဇဝတ် တရား သူကြီး ၏ သို့တည်းမဟုတ် နယ်ပိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီး၏ သို့တည်းမဟုတ် အထူး အာဏာ လွဲအပ်ခြင်း ခံရသော ပထ မတန်း ရာဇဝတ်တရားသူကြီး၏ အမိန့်အရ သတ်မှတ်ထားသည့် ဌာနသို့ ပို့နိုင်ပြီး ထိုမိန်းမ ကို ရောဂါပျောက်ကင်းကြောင်း သက်သေခံရသည့် တိုင်အောင် ထိုဌာန၌ နေထိုင်ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထား သည်ကို တွေ့ရှိ ရပါကြောင်း၊ အထို့အတွက်ကြောင့် ပြည့်တန် ဆာနှိပ်ကွပ်ရေး အက်ဥပဒေမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်က ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေဖြစ်သော်လည်း ယနေ့ခေတ်ကာလတွင် လိုက်နာ ကျင့်သုံးနိုင် မှု ရှိနေသေးကြောင်းတွေ့ ရှိရသည့်အတွက် ၁၉၄၉ ခုနှစ် ပြည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေး ဥပဒေအား ပြန် လည်ပြင် ဆင်ရေး ဆွဲ ရန် အစီအစဉ်မရှိသေးပါကြောင်း ရှင်းလင်းဖြေကြားပါသည်။
ဖြေကြား သည့် ဌာန ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ရဲချုပ်ကျော်ကျော်ထွန်း
လွှတ်တော် ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်
အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန် အစည်းအဝေး
မေးမြန်းသူ ဒေါ်စန္ဒာမင်း (ဇမ္ဗူသီရိ)
အစည်းအဝေးရက် ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော် သတ္တမပုံမှန်အစည်းအဝေး နဝမနေ့ (၉.၇.၂၀၁၃)
ခြောက်လအတွင်း ထိုင်းသို့ လူကုန်ကူးခံရသူ ၁၂၀ ကျော်ရှိပြီး ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် နေထိုင်ကာ အမှုရင်ဆိုင် နေရသူများရှိ
မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူး ခံရသည့် ဦးရေမှာ ယခုနှစ် ခြောက်လအတွင်း ၁၂၀ ကျော် ရှိကြောင်း သိရပြီး အချို့မှာ ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် နေထိုင်ပြီး အမှုရင်ဆိုင် နေရမှုများရှိကြောင်း ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း (ထိုင်းနိုင်ငံ)မှ အကြီးတန်း အကြံပေး ဦးထူးချ စ် က ပြော ကြားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အသင်းနှင့် ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း(ထိုင်းနိုင်ငံ)တို့မှလူကုန်ကူးခံရမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်များတွင်ကူညီစောင့်ရှောက် မှုများ ပေးပြီး ပြုစုထားသည့် စာရင်းဇယားများအရ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ယခုနှစ် ခြောက်လအတွင်း လူကုန်ကူး ခံရသည့် ဦးရေမှာ ၁၂၇ ဦး ရှိကြောင်း အကြီးတန်း အကြံပေး ဦးထူးချစ်က Daily Eleven သတင်းစာ သို့ ပြောကြားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခံခဲ့ရသည့် မြန်မာလူမျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ ''ယခုနှစ် ခြောက်လအတွင်းမှာ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခဲ့တာ ၂၆ ကြိမ် ရှိပါတယ်။ လူကုန်ကူးခံရတဲ့ ဦးရေဟာ ၁၂၇ ဦး ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို လူကုန်ကူးခံရတဲ့ သူတွေထဲမှာ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရောက်နေတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အချို့က ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ နေထိုင်ရပြီးတော့ အမှုရင်ဆိုင် ရတာတွေလည်း ရှိတယ်'' ဟု ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဖောင်ဒေးရှင်း (ထိုင်းနိုင်ငံ) မှ အကြီးတန်း အကြံပေး ဦးထူးချစ်က ပြောကြားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူး ခံရသူအများစုမှာ ငါးဖမ်းလှေများပေါ်တွင် ရှိပြီး တချို့ သူများမှာ စက်ရုံ၊ အလုပ် ရုံများတွင် ရှိကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင် ရှားခြင်း၊ လူကုန်ကူးသည့် ပွဲစားများ ၏ ခေါင်းပုံဖြတ်မှုများကြောင့် တရားမ၀င်လမ်းမှ ပြည်ပသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်နေသူ အများစုသည် လူကုန်ကူးမှု အန္တရာယ် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း သိရသည်။
''လူကုန်ကူးခံရသူ အများစုဟာ ငါးဖမ်းလှေတွေထဲမှာ များတယ်။ စက်ရုံတွေမှာလည်း ရှိတယ်။ သူတို့တွေ ကျွန်တွေလို နှိပ်စက်ခံရတယ်။ ပင်လယ်ထဲမှာပဲ နေရတာ များတယ်။ နေထိုင်စားသောက် ရတာတွေက ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို နှိပ်စက်ခံရတယ်'' ဟု အကြီးတန်း အကြံပေး ဦးထူးချစ်က ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ တရားဝင်လမ်းကြောင်းမှ သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူများမှာ လူကုန်ကူးသည့် ပွဲစားများနှင့်တွေ့ ကာ ရောင်းစားခံရမှုများ ရှိနေပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အများဆုံး ရောင်းစားခံရ သူများမှာတရားမ၀င်လမ်းကြောင်း များမှသွား၍ ရောင်းစားခံရခြင်းမျိုး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူး ခံရသူများအနက် အများစု အမျိုးသားများဖြစ်ပြီး ငါးဖမ်းလှေများတွင် အများဆုံး ရောင်းစားခံရကာ အမျိုးသမီးများမှာ ပြည့် တန်ဆာနှင့် အိမ်ဖော် အလုပ်များတွင် ရောင်းစားခံရကြောင်း သိရသည်။
ဦးထူးချစ်က''လူကုန်ကူးခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေမှာ အကူအညီပေးရာမှာ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခဲ့တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ကူညီဆောင်ရွက်ရတာ များပါတယ်'' ဟု ဆိုသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် လူကုန်ကူးမှုပေါင်း ၁၁၉ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူကုန်ကူးခံရသူ ၂၅၉ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ လာရောက်ပြီး သံဃာယောင်ဆောင်ကာ တည်းခိုခဲ့သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို မသင်္ကာသဖြင့် ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေ
ထိုင်းနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ၀င်ရောက်လာပြီး သံဃာယောင်ဆောင်ကာ တည်းခိုခဲ့သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို မသင်္ကာသဖြင့် ဖမ်းဆီးထားပြီး ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရောက်ရှိလာခြင်း ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဆေးနေကြောင်း အဆင့်မြင့် ရဲအရာရှိ တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား နှစ်ဦးသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး လေကြောင်းခရီးစဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိသည့်အခါတွင် သင်္ကန်းဝတ်ဖြင့် သံဃာအယောင်ဆောင်ကာ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၈) ရပ်ကွက်ရှိ ပိုလိုတည်းခိုခန်း၊ အခန်းအမှတ် (၁၀၅) တွင် တည်းခိုနေစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဇူလိုင် ၉ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲတွင် ၀င်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းနှစ်ဦးမှာ Parsujait Barua (၂၇)နှစ်၊ ပတ်စ်ပို့စ်အမှတ် Ae-4674854 နှင့် Antar Barua (၂၉) နှစ်၊ ပတ်စ်ပို့စ်အမှတ် Ac-9257706 ကိုင်ဆောင်ထားသူများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သင်္ကန်းဝတ်ဖြင့် သံဃာယောင်ဆောင်ကာ တည်းခိုခဲ့သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား နှစ်ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စစ်ဆေးရာတွင် အမည်မသိ မွတ်စလင် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးနှင့် ဖုန်းအဆက်အသွယ် ရရှိပြီး မလေးရှားနိုင်ငံသို့ ပို့ပေးမည်ဟု ပြောသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထွက်လာခဲ့ကြောင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ဒက္ကာလေဆိပ်မှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံလေဆိပ်မှ မြန်မာ့လေကြောင်းနှင့် ဇူလိုင် ၉ ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးချက်အရ သိရသည်။
ရန်ကုန်လေဆိပ်သို့ အရောက်တွင် ဖုန်းဆက်ထားသည့် အမည်မသိ မွတ်စလင် လင်မယားနှစ်ဦးမှ လာရောက်ကြိုခဲ့ပြီး တက္ကစီယာဉ်ဖြင့် ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ အမှတ် (၈) ရပ်ကွက်ရှိ ပိုလိုတည်းခိုခန်း၊ အခန်းအမှတ် (၁၀၅) တွင် တစ်ရက်လျှင်ကျပ် ၁၂၀၀၀ နှုန်းဖြင့် တည်းခိုခဲ့ကြောင်း၊ ထမင်းစားရန်အတွက် သွားရာတွင် မွတ်စလင် လင်မယားနှစ်ဦးမှ သင်္ကန်းဝတ်ဖြင့် မသွားရန်၊ အရပ်ဝတ်ဖြင့် လဲလှယ်ကာ သွားရောက်စားသောက်ရန် စသည့်အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရာ၌ ထွက်ဆိုချက်အရ သိရသည်။
သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ မသင်္ကာတဲ့လူနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး နေတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ဦးက ဖောက်ခွဲဖို့ အကြံအစည်နဲ့ ရောက်လာတာ ဟုတ်မဟုတ်၊ အခြားအကြံအစည်တွေ ရှိမရှိ၊ ဘာကြောင့် ရောက်လာတယ် ဆိုတာကိုတော့ စစ်ဆေးနေတုန်းပါပဲ . . . . .
အဆိုပါ အမည်မသိ မွတ်စလင် လင်မယားနှစ်ဦးကို အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနိုင်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်နေပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားနှစ်ဦးထံမှ ပါရှိလာသည့် ပစ္စည်းများ၊ ပတ်စ်ပို့နှင့် တယ်လီဖုန်းများကိုလည်း သိမ်းဆည်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားနှစ်ဦးနှင့် ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူး ကြီးဝင်းကြည်အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ၄င်းက "အခု ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ မသင်္ကာတဲ့လူနှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး နေတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ဦးက ဖောက်ခွဲဖို့ အကြံအစည်နဲ့ ရောက်လာတာ ဟုတ်မဟုတ်၊ အခြားအကြံအစည်တွေ ရှိမရှိ၊ ဘာကြောင့် ရောက်လာတယ် ဆိုတာကိုတော့ စစ်ဆေးနေတုန်းပါပဲ" ဟု ဇူလိုင် ၉ ရက်၊ ည ၇ နာရီက ပြောကြားသည်။
တည်းခိုခဲ့သည့် ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ပိုလိုတည်းခိုခန်းမှ ညပိုင်းမန်နေဂျာဖြစ်သူ ဦးအောင်ကျော်ဦးက ဇူလိုင် ၉ ရက်၊ ည ၈ နာရီတွင် "သူတို့နှစ်ဦးက ဒီနေ့မနက်မှာပဲ လာပြီးတည်းတယ်။ မွန်းလွဲပိုင်းမှာပဲ ရဲတွေကလာပြီး ဖမ်းသွားတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်အပြင် ဆိုင်က မနက်ပိုင်းမန်နေဂျာ ကိုတင်မောင်မြင့်ကိုလည်း ခေါ်သွားပါတယ်" ဟု ပြောကြားသည်။
ပိုလိုတည်းခိုခန်းမှ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူအား မေးမြန်းရာ ၎င်းက "မနက်ပိုင်း မန်နေဂျာကတော့ ပတ်စ်ပို့ကို ကြည့်ပြီးတော့ တည်းခိုခွင့် ပေးလိုက်တာပါ။ သင်္ကန်းဝတ်နဲ့ လာတာလား၊ အရပ်ဝတ်နဲ့ လာတာလား ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်မသိပါဘူး" ဟု ပြောကြားသည်။
ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူမှ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး လက်ကောက်အား...
လိမ်လည်ဆေးကုသည့် တရုတ်ဆေးခန်းများကို သတိထားရန် ကျန...
ယဉ်ထိန်းရဲ ၈-ယောက်က ဆိုင်ကယ် မောင်းသမားအား အုပ်စုဖ...
မန္တလေးကျုံးပတ်လည် ညအချိန် မိန်းမလျာများကို စတင်အရေ...
ရန်ကုန်၊ သမိုင်းဘူတာရုံလမ်းတွင် အုပ်စုလိုက် အဓမ္မပြ...
"ဗုဒ္ဓဂါယာကို ဗုံးဖောက်ခွဲတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဂျပန...
“VITA သစ်သီးစုံ အစားအစာအလုပ်ရုံမှ လူကုန်ကူးခံရသူ ၉...
ဗုဒ္ဓဂယာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်များ မြန်...
MOST WANTED: အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂါယာဘုရားပရိဝုဏ်ထဲမ...
ခြောက်လအတွင်း ထိုင်းသို့ လူကုန်ကူးခံရသူ ၁၂၀ ကျော်ရ...